စည်းကမ်းချက်များနှင့် အချက်အလက်များအား သဘောတူပါသည်
Facebook အကောင့်ဖြင့် ဝင်မည်
New here? အကောင့်အသစ်ဖန်တီးပါ
MPT Freestyle Football Challenge ကို Covid-19 ကြောင့် အိမ်မှာနေထိုင်ရင်း ပြည်သူများ Stay Home Stay Active ဖြစ်စေဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် MPT နှင့် MNL တို့မှ ပူးပေါင်းကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်သက်ရာ ဘောလုံးအလှပြကစားနေပုံကို Video ရိုက်ကူးပြီး Portal Link မှာ တင်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(ဗီဒီယိုအား တစ်ခါသာ တင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းအား ခွင့်ပြုမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဗီဒီယိုကြာမြင့်ချိန်သည် အနည်းဆုံး စက္ကန့် ၂၀ မှ အများဆုံး ၃ မိနစ်အထိ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဗီဒီယိုသည် 50MB ထက် မပိုရပါ)
တင်ပြီးသော ဗွီဒီယိုကို နောက်နေ့ နေ့လည် (၁) နာရီတွင် MPT မှ ခွင့်ပြုပြီးသည်နှင့် တပြိုင်နက် မိမိ Video ဖိုင်လင့်ခ်ကို ကိုယ်ပိုင် Facebook account မှာ #MPTFreestyleFootballChallenge လို့ ရေးသားပြီး Public နဲ့ တင်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ယခု Challenge ကို မြန်မာနိုင်ငံသူ/သားတိုင်း ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပြီး ဆုလက်ဆောင်ပေါင်း (၂၀) တိတိကို ချီးမြှင့်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆုရွေးချယ်ပုံစနစ်မှာ မဲပေးစနစ် (Voting) ၅၀% နှင့် ဒိုင်လူကြီးများ၏ ရွေးချယ်မှု ၅၀%တို့ဖြင့် ရွေးချယ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁) ပြိုင်ပွဲဝင်ရန် အတွက် အခကြေးငွေ မလိုအပ်ပါ။ ပြိုင်ပွဲဝင်သူ အနေဖြင့် မိမိ၏ Freestyle Football ယှဉ်ပြိုင်ကစားမှုကို ဗီဒီယို ရိုက်ကူးပြီး ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ရမည် ဖြစ်သည်။ ဗီဒီယိုမှာ အနည်းဆုံး စက္ကန့် ၂၀ မှ အများဆုံး ၃ မိနစ်ထိ ကြာချိန်ရှိရမည်။
ရိုက်ကူးထားသော ဗီဒီယိုကို Voting များပေးရန်အတွက် MPT ၏ Portal (link) တွင်လာရောက် Upload လုပ်ရပါမယ်။ Upload မလုပ်မှီ သတ်မှတ်ထားသော အချက်အလက်များ (MPT Phone Number, Name and etc...) ကို ဖြည့်စွက်ပြီး Sign Up လေးကို ကြိုတင်ပြုလုပ်ပေးရပါမယ်နော်။ တင်ပြီးသော ဗွီဒီယိုကို နောက်နေ့ နေ့လည် (၁) နာရီတွင် MPT မှ ခွင့်ပြုပြီးသည်နှင့် တပြိုင်နက် မိမိ Video ဖိုင်လင့်ခ်ကို ကိုယ်ပိုင် Facebook account မှာ #MPTFreestyleFootballChallenge လို့ ရေးသားပြီး Public နဲ့ တင်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
၂) ဗီဒီယိုများသည် ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး မသင့်လျော်သောဗီဒီယို မဖြစ်ရပါ။
၃) ပြိုင်ပွဲဝင် ဗီဒီယိုများသည် ပိုင်ရှင်၏ ခွင့်ပြုချက်ပါရမည်ဖြစ်ပြီး MPT မှ အခြေအနေအမျိုးမျိုးတွင် သုံးခွင့်ရှိသည်ဟု ယူဆပါမည်။
၄) လူတစ်ယောက်လျှင် ဗီဒီယို တစ်ခုနှင့် တစ်ကြိမ်သာ ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၅) ပြိုင်ပွဲဝင်ထားသော ပြိုင်ပွဲဝင် ဗီဒီယိုများထဲမှ Winner Prize အယောက် (၂၀) နှင့် Early Bird Prize ပထမဦးဆုံး အယောက် (၂၀) ကို ရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Early Bird Prize ကိုတော့ အစောဆုံးလာရောက်ယှဉ်ပြိုင်သူများအား ရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်ပြီး Winner Prize အယောက် (၂၀) ကိုတော့ 50% Voting နှင့် 50% Judgement စနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Early Bird Prize အယောက် (၂၀) အတွက်ကတော့ ပြည်တွင်း နာမည်ကျော် ဘောလုံးကစားသမားရဲ့ အမှတ်တရလက်မှတ်ပါရှိတဲ့ ဘောလုံး (၁) လုံးစီ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
Winner Prize အယောက် (၂၀) အတွက်ကတော့
Consolidation prizes (17 prizes) – 50,000 MMK တို့အား MPT Money Application မှတစ်ဆင့် ချီးမြင့်သွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒိုင်လူကြီးတွေအဖြစ် မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်မှ ကိုမျိုးလှိုင်ဝင်း၊ ကိုစိုးမြတ်မင်းနှင့် ကိုသီဟစည်သူတို့က ပါဝင်အမှတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
၆) ဆုရရှိသူများကို ဇွန်လ ၁၉ ရက်တွင် MPT Official Facebook စာမျက်နှာ မှတစ်ဆင့် ကြေညာပေးသွားမည်။ထို့နောက် ဆုချီးမြှင့်ရန် အသေးစိတ်ကို Portal တွင်တင်ထားသော ဖုန်းနံပါတ်မှတဆင့် ဆက်သွယ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
၇) ကံထူးရှင်ဖြစ်ကြောင်း MPT မှ ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားသည့်နေ့မှစ၍ ၁၀ ရက်အတွင်း ကံထူးရှင်သည် MPT Money အကောင့်ဖွင့်ရန် ပျက်ကွက်ပါက MPT မှဆုလက်ဆောင်ကို ပေးအပ်ရန် ငြင်းပယ်ခွင့်ရှိပါသည်။
၈) ယှဉ်ပြိုင်သူသည် vote အတုများ သုံးထားပါက သို့မဟုတ် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် မညီညွတ်ပါက ပြိုင်ပွဲမှ အလိုအလျောက် နှုတ်ထွက်ရမည်ဖြစ်သည်။
၉) မိမိ Personal Facebook account ဖြင့်သာ ၀င်ရောက်ယှဥ်ပြိုင်နိုင်သည်။ ၁၀) ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သူသည် အထက်ပါ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းချက်များကို ဖတ်ရှုနားလည်ပြီးသည်ဟု ယူဆမည်ဖြစ်သည်။
၁၁) စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို MPT မှ အခါအားလျော်စွာ ပြောင်းလဲခွင့်ရှိသည်။.
T&C, FAQ နှင့် Voting Result များကို MPT Portal (https://bit.ly/2A8jvlW) တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
၁၃) အငြင်းပွားဖွယ်တစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပေါ်လာလျှင် MPT ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည်သာ အတည်ဖြစ်သည်။
Consolidation prizes (17 prizes) –
50,000 MMK တို့အား MPT Money Application